Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina TYS230-3 Shehwa
Isakhiwo Esijwayelekile Bulldozer
I-Bulldozer yokushayela ephakeme
I-Bulldozer yokulahla inkunkuma
Umsebenzi we-Bulldozer omningi
Isisetshenziswa Sokudaya Amapayipi
Izingxenye elingasebenzi Support
Isiteshi Sikagesi Samaselula
I-SWMC-X5 Hydraulic Drilling Rig
I-SWMC-370-DTH ehlukanisiwe esekwe endaweni ephakeme yokubacindezela ...
I-TY230-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever. Uhlelo lokusebenza olwenzelwe ngokuya ngobunjiniyela bomuntu nomshini lwenza ukusebenza kube lula, kahle nangokunemba.
I-TY230-3 bulldozer imisiwe okwesikhashana, ukudluliswa kwe-hydraulic, uhlobo lwe-hydraulic track track bulldozer. Ukudluliswa kweplanethi, ukuhanjiswa kwamandla okusetshenziswa yi-Unilever. Uhlelo lokusebenza olwenzelwe ngokuya ngobunjiniyela bomuntu nomshini lwenza ukusebenza kube lula, kahle nangokunemba. Amandla aqinile, ukusebenza okuhle kakhulu, ukusebenza kahle okuphezulu nokubukwa okubanzi kubonisa izici zenzuzo. Kungukukhetha kwakho okuhle ekwakheni umgwaqo, ukwakhiwa kukagesi kagesi, ukuguqulwa kwensimu, ukwakhiwa kwamachweba, ukuthuthukiswa kwezimayini nokunye ukwakhiwa.
● Ukucaciswa okuyinhloko
Isisindo sokusebenza (kufaka phakathi i-ripper) (Kg): 26710
Ukucindezela komhlaba (kufaka phakathi i-ripper) (KPa): 42
I-gauge yethrekhi (mm): 2250
Ubuncane. imvume yomhlaba (mm): 510
Amandla we-dozing (m): 11
Ububanzi beBlade (mm): 4310
UMax. ukumba ukujula (mm): 500
Ubukhulu bebonke (mm): 606043103425
Uhlobo: CUMMINS NT855-C280S10
Kukalwe inguquko (ngomzuzu): 2000
Amandla we-Flywheel (KW / HP): 169/2000
UMax. i-torque (Nm / rpm): 1036/1400
Kukalwe ukusetshenziswa kukaphethiloli (g / KWh): 217
Uhlelo lokuhamba ngaphansi kwesisu
Uhlobo: Swing uhlobo ugongolo olufuthwe.
Isakhiwo esimisiwe sebha yokulinganisa: 8
Inani lamathrekhi wokugoqa (ohlangothini ngalunye): 8
Inani lama-roller othwala (ohlangothini ngalunye): 2
I-Pitch (mm): 216
Ububanzi besicathulo (mm): 910
Igiya Eyokuqala yesi-2 yesithathu
Phambili (Km / h) 0-3.8 0-6.8 0-11.8
Emuva (Km / h) 0-4.9 0-8.5 0-14.3
Sebenzisa uhlelo lwe-hydraulic
UMax. ingcindezi yohlelo (MPa): 19.1
Uhlobo lwempompo: Igiya futha kawoyela
Okukhipha uhleloL / min: 194
Isiguquli seTorque: isigaba-3 isigaba 1 isigaba-1
Ukudluliswa: Ukudluliswa kweplanethi, ukudluliswa kwamandla okuhamba ngejubane ezintathu ukuya phambili kanye nezivinini ezintathu ukubuyela emuva, isivinini nesiqondiso kungasuswa ngokushesha.
I-steering clutch: Idiski yamandla kagesi kagesi amaningi acindezelwa entwasahlobo. umfutholuketshezi eziqhutshwa.
Braking bamba: Brake kuyinto uwoyela ezimbili ohlangothini ezintantayo band ukubopha eziqhutshwa ngomshini unyawo isinyathelo.
Idrayivu yokugcina: Idrayivu yokugcina ingukuncishiswa okuphindwe kabili ngamagiya e-spur ne-segment sprocket, evalwe ngophawu lwe-duo-cone.
Langaphambilini I-TYS165-3 Bulldozer
Olandelayo: I-SD7LGP Bulldozer
I-Bulldozer Yokuvikela Amahlathi
Ukusingathwa kukadoti ngogandaganda
I-SD7K LGP Bulldozer
I-SD7 Multi-function Bulldozer
Ikheli: Yard No.172, Shengtai Road, Xuanhua, Zhangjiakou, Isifundazwe Hebei, China
Ucingo: +86 18631391536 (WhatsApp)
Ifeksi: +86 313 3865588
I-SWMC 370 imishini yokumba ngaphansi komhlaba igcwalise ngempumelelo iphrojekthi yokuqoqa isisekelo sephrojekthi yezindlu eGuangzhou, eChina. Iphrojekthi yezindlu e-Guangzhou ihlanganisa indawo engama-62,000 m2, lapho i-44,000 m2 i ...
Ngokushoda kwamandla kagesi okwandayo, ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwamandla amasha kudonse ukunakekela kwawo wonke amazwe emhlabeni.Ngasikhathi sinye, amandla amasha we-China we-photovoltaic ngu ...
Septhemba — Ikota lekwindla liza, inkathi yokuvuna enezithelo ezicebile nephunga elimnandi! Ugandaganda ofaka ukusebenza ngokuzikhandla kwabasebenzi beHBXG yePhrojekthi yaseRussia iPetroplem enqotshwe yiHBXG ubulokhu usebenze kahle ...
I-SWMC, umkhiqizi woMshini wokubhola, ngendlela efanayo yokuhlinzeka ngemikhiqizo ephelele yamakhasimende, isebenzisa iminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni somkhakha ukuhlinzeka nge-dril ethembekile ...
NgoMashi 12, 2020, iqoqo le-SD7N i-bulldozer ephakeme-yathunyelwa ukuzohlala futhi ilungele ukulayishwa kwezimakethe zezifunda zaseRussia neCIS. Le batch bulldozers ithengwa yimayini yezimayini ...